Kenya oo qaadeysa talaabo ay ku xoojineyso joogitaankeeda Somaliland
Xukuumadda Nairobi ayaa mar kale meel uga dhacdey madax-banaanida Soomaaliya.
HARGEYSA, Somaliland – Kenya ayaa qorsheyneysa in ay xafiisyo diblumaasiyadeed ka furato Somaliland si ay u xoojiso joogitaankeeda, sidda uu shaaciyey xafiiskeeda magaaladda Hargeysa.
Dhinacyadda ayaa hadda wadaaga xafiisyo shacabka labada dhinac u fududeeya adeegyo ay kamid yihiin socdaalka iyo shaqooyinka.
Sidda laga soo xigtay xafiiska Kenya ee Hargeysa, muwaadiniinta ka jooga Somaliland ayaa ku badan qeybaha Isbitaalada iyo waxbarashadda, waana sababta ku riixeysa ay la furo xafiisyo diblumaasiyadeed.
Balse ma bixin tafaasiil dhameystiran oo la xiriirta waqtiga rasmi ahaan ay furayaaan xafiisyadaas.
Qoraalka xafiiska oo meel looga dhacay madax-banaanida Soomaaliya ayaa Somaliland wuxuu ku qeexay "waddan".
"Kenya way ku bogaadineysaa in ay Somaliland ku nool yihiin muwaadiniin badan oo Kenyan ah kana shaqeystaan. Sidaas darteeda, dowladda Kenya waxay ka shaqeyneysaa sidii ay u furan lahayd xafiisyo diblumaasiyadeed," ayay tiri.
Waxay raacisay: "Tani waxay horumarineysaa xafiisyadda 'labada qaran' waxayna Kenyaanka siineysaa in ay helaan adeegyadda dowladooda".
Hadalkaan ayaa kusoo hagaagaya xilli wafuud Kenyan ah ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay ka dageen Hargeysa isla markaana kuwa kale ay kusii jeedaan.
Mas'uuliyiin labada dhinac ka tirsan ayaa horey u sheegay in ay go'an tahay kawada shaqeynta nabada iyo xasiloonida gobolka isla markaana ay xoojinayaan xiriirkooda.
Somaliland ayaa 1991-dii waxay ku dhawaaqdey in ay ka go’dey Soomaaliya inteeda kale, balse wali ma aysan helin aqoonsi caalami ah, iyaddoo dunida u aragto maamul hoostaga dowlada federaalka.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Kenya oo booqanaya Somaliland
Afrika 09.07.2020. 06:45
Illo wareedyo kala duwan ayaa sheegay socdaalka uu daaran yahay ajande liddi midnimada Soomaaliya.
DF oo Kenya u ogolaatey inay Qunsuliyado ka furato Kismaayo iyo Hargeysa
Soomaliya 29.10.2018. 22:03
Askar ajnabi ah oo lagu dilay Gedo [Fahfaahin]
Soomaliya 15.09.2018. 10:27
Kenya oo Somaliland ku tilmaamtay "dal" xili xiriirka DF uu sii xumaanayo
Wararka 27.06.2019. 17:56
Wararkii ugu dambeeyay Xiisada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya
Soomaliya 17.02.2019. 15:40
Wasiirada arrimaha dibada Somalia iyo Kenya oo shir ku leh Mandheera
Soomaliya 29.01.2019. 15:36
Qaabka ay Kenya "uga shaqeyneyso" aqoonsi ay hesho Somaliland
Afrika 08.07.2020. 16:00